'नेकपा जेट'मा 'ककपिट'भित्रै झगडा : 'सेफल्यान्डिङ' कि दुर्घटना ?
'नेकपा जेट'मा 'ककपिट'भित्रै झगडा : सेफल्यान्डिङ कि क्र्यास ?
बुधवारको दिन । समय अपराह्न १ बजे । स्थान बालुवाटार ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित कोटामा राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय भएको बताए ।
'पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सदस्यमा सिफारिशका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ,' प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका थिए ।
बैठक सकिएपछि नेकपा सचिवालय सदस्यहरू लाखापाखा लागे ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' आफ्नो निवास खुमलटार फर्केर आराम गर्दै थिए ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि कोटेश्वर पुगिसकेका थिए ।
करीब १:४५ बजे वरिष्ठ नेता नेपालको फोनको घण्टी बज्यो । फोन बालुवाटारबाट आएको थियो ।
फोनमा प्रधानमन्त्रीले भने– 'म राष्ट्रिय सभामा वामदेवलाई सिफारिश गर्न सक्दिनँ, खतिवडालाई नै लैजाने सिफारिश भइसकेको छ, र यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्न तयार छु ।'
करीब १ घण्टाअघि पार्टीको हाइकमाण्ड सचिवालयले गरेको निर्णय मान्दिन भन्दै प्रधानमन्त्रीले चेतावनीयुक्त भाषामा फोन गरेपछि नेता नेपाल अचम्ममा परे ।
सशंकित हुँदै उनले जवाफ फर्काए– त्यसो नगर्नुस् ।
त्यसपछि ओलीले भेटेरै कुरा गर्ने भन्दै अपराह्न ४ बजे बालुवाटार आउन आग्रह गरे ।
'अब कि वार, कि त पार हुन्छ' भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भएका ओलीले बालुवाटारमै भेट हुन्छ भन्दै फोन काटेको विश्वस्त स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।
अपराह्न २ बजे लोकान्तरले 'नेकपाभित्र भिडन्तको संकेत, वामदेवको नाम उल्ट्याएर युवराजको नाम सिफारिश !' शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्‍यो ।
नेपाली राजनीतिमा यो एउटा ठूलै परिघटना थियो । वामदेव राष्ट्रिय सभामा जाने र युवराज खतिवडा बिदा हुने समाचार पढिरहेका पाठकहरू मात्र होइन स्वयं नेताहरू नै अचम्ममा परे ।
यतिबेलासम्म नेताहरूबीच फोन आदानप्रदान भइसकेको थियो ।
पार्टीको निर्णय मान्दिन भन्ने प्रधानमन्त्रीको अडानले नेकपा वृत्तमा हल्लाखल्ला पैदा गर्‍यो ।
३ बजेतिर अन्य सञ्चारमाध्यमहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णय मान्न नचाहेको आशयका समाचार लेखे ।
नेकपाभित्र भुइँचालो नै आइरहेका बेला अपराह्न ४ बजे वरिष्ठ नेता नेपाल बालुवाटार छिरे ।
ओली र नेपालबीच करीब २ घण्टा कुराकानी भयो ।
कुराकानीका क्रममा ओलीले अर्थमन्त्री खतिवडालाई हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको, पार्टीको निर्णय मान्न सरकार बाध्य नहुने, गौतम अचानक संविधान संशोधनको मागबाट पछि हट्नुले गम्भीर आशंका पैदा गरेको लगायतका जिकिर पेश गरे । तर, स्रोत भन्छ– ओलीको जिकिरमा नेपाल कन्भिन्स भएनन् ।
माधव नेपाल बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना निकटस्थहरूसँग बसे ।
राति अबेर बालुवाटारमा आफ्नो कोर टीमसँग बसेर प्रधानमन्त्रीले सल्लाह मागे ।
स्रोतको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीका अतिनिकट मानिने प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टाराई लगायतले उनलाई सुझाव दिए– ‘पार्टी निर्णय उल्टाउनु भनेको ठूलो आत्मघाती कदम हुनसक्छ, यसले तपाईंलाई नै संकटमा पार्छ । यस्तो आत्मघाती कदम नचालौं ।'
रिमाल र भट्टराई अधिकांश समय प्रधानमन्त्रीसँगै हुन्छन् ।
सचिवालयका अन्य सदस्यहरूले दिउँसो २ बजेदेखि राजनीतिक घटनाक्रमले नाटकीय मोड लिइरहेको हेरिरहेका थिए । नेता नेपाल र अन्य केही सचिवालय सदस्यलाई आफूले पार्टीको निर्णय नमान्ने चुनौती दिएपछि पनि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, महासचिव विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूलाई कन्भिन्स गर्न खोजेका थिए ।
प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका शेखरसँग पनि मागे सल्लाह
बिहीवार बिहान साढे ८ बजे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । ओलीले नै आफूलाई बोलाएको नेता कोइरालाले लोकान्तरसँग बताए ।
'तपाईंहरू त प्रतिपक्षी हुनुभयो, तर आफ्नैले असहयोग गरिरहेका छन्,' ओलीले कोइरालासँग गुनासो गरे ।
ओली र कोइरालाबीच डेढ घण्टासम्म भएको छलफलमा राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको कोइरालाले लोकान्तरसँग बताए ।
बिहीवार यो टिप्पणी लेख्दासम्म पार्टीभित्रको विवाद सल्ट्याउने विषयमा नेकपा नेताहरूबीच ठोस र औपचारिक छलफल भएको छैन । ओलीइतर नेताहरू प्रधानमन्त्रीको आगामी कदमलाई हेरेर रणनीति तय गर्ने मनस्थितिमा छन् ।
नेकपा जेट क्र्यास ल्यान्डिङको खतरामा
पार्टी एकता भएको २१ महिनाको बीचमा नेकपामा यो स्तरको विवाद सतहमा आएको थिएन ।
'यो ठूलो खड्को हो पार्टीका लागि,' नेकपाका एक स्थायी कमिटीले लोकान्तरसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय नमान्दा यो समस्या आएको हो । यसको समाधान भनेकै प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मान्नु हो ।'
पार्टी एकता हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा कुनै टेम्पो नभएको टिप्पणी गरेका थिए । दुई अध्यक्ष किन बन्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्नमा ओलीले भनेका थिए, 'यो जेट विमान हो, जेटमा दुई पाइलट हुन्छन् ।'
तर पाइलटहरूकै द्वन्द्वका कारण नेकपा नामको जेट २१ महिनापछि दुर्घटनाको संघारमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । पाइलटहरूबीच असहमति र विवाद सिर्जना हुँदा जेटमा सवार ८ लाखभन्दा बढी नेता/कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्य धरापमा परेको छ ।
सहमति र संवादका लागि 'क्याबिन क्रु'का रूपमा रहेका सचिवालयका अन्य सदस्यहरूले बारम्बार जोड गरेपनि ककपिटमा रहेका पाइलटद्वयबीच चरम अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।
जेटलाई सेफ ल्यान्डिङ गराउन सचिवालयका अन्य सदस्यहरूले अनौपचारिक प्रयास गरिरहेका छन्, तर खतरा टरिसकेको छैन ।
के भएको थियो सचिवालय बैठकमा ?
बुधवार बसेको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीले जनाएको सहमति व्यंग्यात्मक थियो ।
'तपाईंहरूले बाहिरै निर्णय गरेर आउनुहुन्छ, ल भन्नुस् अब के गर्नपर्‍यो ?' उनी यसरी प्रस्तुत भएको सचिवालयका एक सदस्यले लोकान्तरलाई बताए ।
'हिजोको बैठकमा उहाँ फ्रेस देखिनुभएको थिएन,' ती नेताले लोकान्तरसँग भने, 'संविधान संशोधन नहुने भएपछि वामदेव कमरेड कुनै पनि हालतमा राष्ट्रिय सभामा जानुहुन्न भन्ने उहाँको बुझाई रहेछ । तर पछि संविधान संशोधन गर्न सकिने गरी वामदेव कमरेडलाई तत्कालका लागि राष्ट्रिय सभामा जान अन्य नेताहरूले जोड गर्नुभयो । उहाँ(वामदेव)ले मान्नुभयो । त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई निराश बनाएको हुनुपर्छ ।'
बैठकमा शुरुमै अध्यक्ष प्रचण्डले बोलेका थिए । 'संविधान संशोधनको विषयलाई तत्काल थाति राखौं, यसले खासै राम्रो सन्देश दिएन । वामदेव कमरेड निशर्त राष्ट्रिय सभामा जान तयार हुनुपर्छ ।'
त्यसपछि वरिष्ठ नेता नेपाल बोले, 'उहाँ (प्रचण्ड)को भनाइमा म सहमत छु । संविधान संशोधन गर्ने कुरा हुँदै जान्छ । अहिलेलाई वामदेवजी राष्ट्रिय सभामा जानुस् ।'
अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालको भनाइमा ईश्वर पोखरेलबाहेक सबै सदस्यले सहमति जनाए ।
पोखरेल चुपचाप बसिरहेका थिए । सचिवालयका एक नेताले भने, 'प्रचण्ड र माधव नेपालको भनाइमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सहमति जनाउनु भएको हो ।'
त्यसपछि उपाध्यक्ष गौतमले संविधान संशोधन गर्ने निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीकै सचिवालयबाट सार्वजनिक गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
'म राष्ट्रिय सभामा जान्छु,' गौतमले आक्रोश पोखे, 'तर सचिवालयबाट भएको निर्णयको गोपनीयता कायम हुनुपर्‍यो । ममाथि चरणबद्धरूपमा किन आक्रमण भएको हो ? कि पार्टीबाट निकाल्नुस्, कि त ममाथि भइरहेको आक्रमण रोकिनुपर्‍यो ।'
यति भइसकेपछि माइन्युट तयार भयो । गत शनिवार बसेको सचिवालय बैठकले प्रस्ताव गरेको कार्यदललाई निश्क्रिय बनाउने र उपाध्यक्ष गौतमलाई केही दिनमा खाली हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
पार्टीको निर्णय नमान्नुको विकल्प छैन
वरिष्ठ नेता खनालले प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मान्नुको विकल्प नरहेको बारम्बार दोहोर्‍याएका छन् ।
बिहीवार एक दैनिक पत्रिकालाई अन्तर्वाता दिँदै खनालले भनेका छन्, 'म यति भन्छु– पार्टी निर्णय नेकपाका सबै नेता–कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्छ । पार्टी निर्णयको खिलाफमा जाने छूट कसैलाई पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पनि टाउकाले टेकेर पनि पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।'
खनालले या त पार्टी छोड्नुपर्ने, या त पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै चेतावनी शैलीमा पार्टी निर्णयको बचाउ गरेका छन् ।
खनाल मात्र नभएर महासचिव विष्णु पौडेलले पनि प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय भएको उनको दाबी छ ।
वामपन्थी राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि पार्टीको निर्णय नमान्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएका छन् ।
लोकान्तरसँग कुरा गर्दै विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने, 'प्रधानमन्त्रीको अहंकार ठूलो देखियो । पार्टीको निर्णय नमान्नुभनेको तानाशाही बन्नु हो । यसले पार्टीलाई मात्र होइन देशलाई नै संकटमा पार्नेवाला छ ।'
उनले अहिले प्रधानमन्त्री एउटा व्यक्ति मात्र नभएको बताए ।
'उहाँ व्यक्तिका रूपमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन,' श्रेष्ठले भने, 'प्रधानमन्त्री एउटा संस्था हो । सरकार केपी ओलीको मात्र होइन, समग्र नेकपाको हो ।'
अर्का राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले पार्टीको निर्णय नमान्ने ओलीसँग प्रधानमन्त्री भइरहने नैतिकता नरहेको बताउँछन् ।
'उहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन, पार्टीले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो,' महर्जनले भने ।
महर्जनले प्रधानमन्त्रीसामु पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने या मध्यमार्गी प्रस्तावका रूपमा तेस्रो व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न सिफारिशका लागि पार्टीमा लैजाने दुई विकल्प रहेको बताए ।
पढ्नुहोस्, सम्बन्धित समाचार :
BREAKING : नेकपाभित्र भिडन्तको संकेत, वामदेवको नाम उल्ट्याएर युवराजको नाम सिफारिश !
पार्टी र प्रधानमन्त्रीबीच औपचारिक द्वन्द्व सतहमा, एक्लै थेग्न सक्छन् ओली ?
माधव नेपालसँगको भेटपछि निकटस्थसँग ओलीले भने– खतिवडालाई सिफारिश गर्ने निर्णयबाट ब्याक हुन्न
१५औं पञ्चवर्षीय योजनाले अब काम गर्दैन, अर्थतन्त्रको स...
भारतीय दूतावासमाथि 'ओली आक्रोश' : बाछिटा कहाँसम्म...
चमेराे रुखमा उल्टो किन झुण्डिन्छन् ? थाहा पाउनुस् रहस्य
काेराेना संक्रमितकाे संख्या झन्डै साढे १५ हजार, ३४ जनाको मृत्यु
नेकपा प्रवक्ताको रात्रिकालीन ट्वीटः राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग अनर्गल र झुठा प्रचार हाे
कोरोना रोकथामसँगै अर्थतन्त्र माथि ल्याउनसमेत काम गरिरहेको छ- परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
देशभर १६ विपद्का घटना : ९ जनाकाे मृत्यु, २० घरमा क्षति
एकैदिन एक हजार नेपाली स्वदेश फर्किए
ह्याण्ड स्यानिटाइजर कसरी बन्यो ? यस्ताे छ इतिहास